Kooxda Manchester United oo dib ugu laabanaysa doonista daafaca Benfica ee Ruben Dias – Gool FM
(Manchester) 10 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa dib ugu laabanaysa suuqa kala iibsiga bisha Janaayo daaficii mudada ay dooneysay ee Rubin Diaz kaasoo haatan ka tirsan Naadiga Benfica.
Daafaca reer Portugal ayaa suuqii xagaaga la la xiriirinayay kooxda Manchester United balse, xiddigan ayaa go’aansaday inuu iska sii joogo kooxdiisa, markaas oo ay Red devils u weecatay soo qaadashada Harry Maguire, Man United ayaana hadda dooneysa inay mar kale ku laabato xiddiga reer Portugal ee Rubin Diaz.
Kooxda Manchester United ayaa 22-sano jirkaan ku soo qaadan doonta 80 milyan oo gini marka la gaaro suuqa kala iibsiga Janaayo sida uu warinayo Wargeyska The Sun.
Xiddigan reer Portugal ayaa qiimaha lagu heli karay suuqii aynu ka soo gudubnay wuxuu ahaa 60 milyan oo gini, balse hadda kor ayuu u kacay qiimaha lagu heli karo.
Kooxda Benfica waxa ay dooneysaa inay xiddigeeda sii ceshato inta ka dhiman xilli ciyaareedkan, iyagoo doonaya inay ka saxiixdaan heshiis cusub kaasoo uu ku qaadanayo lacago badan, balse kooxda reer Portugal ayaa waxay fahamsan tahay in midaasi ay si fudud ku dhici doonin marka loo eego xiisaha tirada badan ee daafacan uu ka helaayo kooxda Manchester United.